Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / Dhaqaalaha xilliga wakhtiga magan-gelyada / Bangi iyo xisaab bangi
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 4 2019
Sida adigaaga ah magan-gelyo doon u samaysan karto xisaab bangi
Adigaaga ah magan-gelyo doon haystana AT-UND waxaad heli kartaa xisaab bangi iyo kaar bangi labadaba. AT-UND waa caddaynta inaanad u baahnayn sharci shaqo si aad uga shaqayso Iswiidhan.
Ka hor intaanad macmiil ka noqon bangi oo helin adeegyada bangiga waxaa bangigu u baahanyahay inuu hubiyo aqoonsigaaga. Bangigu waxaa kale oo uu u baahanyahay inuu ogaad halka lacagtaadu ka imanayso iyo sida aad u isticmaali doonto adeegyada bangiga. Sidaas darteed waxay ku weydiin doonaan su'aalo ka hor intaanad helin adeegyada bangiga. Bangigu wuxuu xadayn karaa adeegyada bangiga ee adigaaga magan-gelyo doonka ahi aad heli karto.
Si loo fudaydiyo aqoonsiga magan-gelyo doonka xaqa u leh inay shaqeeyaan waxaa Ururka Bangiyada Iswiidhan iyo Hey'ada Socdaalku dejiyeen nidaam gaar ah.
Nidaamkani wuxuu yahay in qofka doonaya inuu furto xisaab bangi uu kaarkiisa LMA tuso bangiga. Adigu waxaad xitaa u baahantahay inaad tusto koobi la xaqiijiyay oo ah dukumentiga aqoonsiga ee aad u dhiibtay Hey'ada Socdaalka. Koobiga la xaqiijiyay micnaheedu waa inuu leeyahay shaambad caddaynaysa in koobigani la mid yahay ka asliga ah. Bangigu wuxuu ka dib la xiriiraa Hey'ada Socdaalka taas oo caddayn karta in dukumentigan aqoonsigu waafaqsanyahay ka la dhiibay.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan bangiga iyo xisaabta bangiga.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan AT-UND.